भ्युज कमाउँदै नेपाली फिल्मका गीत, कसले कति कमाए ? « Ramailo छ
भ्युज कमाउँदै नेपाली फिल्मका गीत, कसले कति कमाए ?
प्रकाशित मिति : Aug 15, 2017
पछिल्लो समय युटुवमा रिलिज भएका नेपाली फिल्मका गीतहरुले भ्युज बढाइरहेका छन् । पछिल्लो समय युटुवमा रिलिज भएका नेपाली फिल्मका गीतहरुले भ्युज बढाइरहेका छन् । फिल्म ए मेरो हजुरको शिर्ष गीतले ६० लाख बढी भ्युज पाएको छ । साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह र सलिनमान बनियाँ फिचरिङ गीतको भिडियोलाई निकै नै रुचाइएको छ । भिडियो :
‘छक्का पञ्जा २’ मा समावेश ‘नाइलनको साडीमा’ ले पचार लाख बढी भ्युज पाइरहेको छ भने ‘रुद्रप्रिया’ र ‘ग्याङ्गस्टर ब्लुज’को गीतले दश लाख बढी भ्युज पाएका छन् । यस्तै फिल्म ‘ऐश्वर्य’ को रोमान्टिमक गीतले छोटो समयमै ७ लाख बढी भ्युज कमाएको छ । रोमिय एण्ड मुनाको तीज गीतले चार लाख भ्युज पाएको छ । ‘नाइलनको साडीमा’ :
अल्मोडा राना उप्रेतीको संगीत रहेको ‘नाइलनको साडी’ मा गीतले विभिन्न विवादका कारण पनि थप चर्चा पायो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गीतको भ्युजमा देखिएको हो । कालि प्रसाद बाँस्कोटाको स्वर तथा संगीत रहेको ‘ग्याङ्गस्टर ब्लुज’ को ‘अजम्बरी’ बोलको गीतलाई रुचाइएको छ । गीतमा आशिरमान देशाज र आना शर्मा फिचरिङ्ग छन् । ‘ग्याङ्गस्टर ब्लुज’ को ‘अजम्बरी’ :
रेखा थापा र आर्यन सिग्देल आठ वर्षपछि ब्याक हुँदा ‘रुद्रप्रिया’ को पहिलो गीति भिडियो प्रतिक्षामा थियो । राजनराज सिवाकोटीको संगीतमा ‘रुद्रप्रिया’ को डान्सिङ्ग नम्वरको भिडियोले दर्शकको मन जित्न सफल पनि रह्यो । ‘रुद्रप्रिया’ को डान्सिङ्ग नम्वर :
यस्तै अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको फिल्म ‘ऐश्वर्य’ को ‘तिमी रोएको पल’ ले मन जिति रहेको छ । सुन्दर दृश्यमा खिचिएको भिडियोमा रमेश उप्रेती र दीपिका प्रसाईं फिचरिङ्ग छन् । कोशिस श्रेत्रीको संगीत रहेको ‘रोमियो एण्ड मुना’को डानसमा म एक नम्वरलाई चार लाख बढीले हेरेका छन् । जे होस् पछिल्लो समय नेपाली फिल्मप्रति दर्शक तथा श्रोताको चासो बढिरहेको छ । २ रुपैयाँमा समावेश कुटुमा कुटु बोलको गीतले छोटो समयमै एक करोड भ्यअर्स पाएको छ । ‘ऐश्वर्य’ को ‘तिमी रोएको पल’ :
‘रोमियो एण्ड मुना’को ‘डानसमा म एक नम्वर’ :
कुटुमा कुटुमा :